साम्राज्ञीलाई रेनशाको माया कि नियन्त्रण ? – Mero Film
साम्राज्ञीलाई रेनशाको माया कि नियन्त्रण ?
अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले इन्टु मिन्टु लण्डनमापछि कुनै पनि फिल्ममा संझौता गरेको खबर छैन । साम्राज्ञीले यो फिल्मका लागि जुन खालको प्रमोशनमा साथ दिएकी छिन्, त्यस्तो साथ अरु फिल्मलाई दिएकी थिइनन् ।
साम्राज्ञीले अरु फिल्म साइन नगर्दा रेनशाले उनलाई अरु फिल्ममा काम गर्न नदिएको हल्ला पनि छ फिल्मी बजारमा । रेनशाको नियन्त्रणमा साम्राज्ञी रहेको र उनीसँग त्यस्तै संझौता रेनशाले गरेको हल्ला फिल्मी बजारमा चलेको छ ।
तर, निर्देशक रेनशा वान्तवा राइले साम्राज्ञीसँग कुनै पनि त्यस्तो खालको सम्झौता नभएको बताएकी त छन् । तर, के रेनशाको कुरा पत्याउन सकिने अवस्था छ ?
साम्राज्ञीले त रेनशाले हुन्छ नभनेसम्म अरु ब्यानरका फिल्ममा चासो समेत नदेखाएको हल्ला छ । रेनशाप्रति साम्राज्ञीले अगाधै माया दर्शाएकी छिन् । यस्तै माया उनले अरु फिल्मलाई पनि देखाएको भए ? रेनशाप्रति साम्राज्ञीको माया हो कि रेनशाको सम्राज्ञी प्रतिको नियन्त्रण वुझ्न नसक्ने अवस्था छ ।
२०७५ भदौ २१ गते ११:४७ मा प्रकाशित